Ikamu Wezingane "Azure" (Vyksa): incazelo izimo zokuphila, ukwelashwa, ukubuyekezwa
ikamu Wezingane "Azure" (Vyksa) itholakala 200 km eningizimu-ntshonalanga ye-Nizhny Novgorod, loMfula i-Oka, ku Vyksa wesifunda, pine ihlathi olunothile. Umlando isikhungo semfundo kanye nezempilo-sithuthuka esiyingqayizivele kwaqala ngo-1995.
Unyaka wonke ekamu izingane kusukela eminyakeni engu-11 kuya ku-16 futhi omunye zokungcebeleka best Nizhny Novgorod esifundeni - ekamu "Azure". Vyksa - idolobha elincane, okuyinto eziningi ngaphandle esifundeni lwafinyelela emva kuvulwa isikhungo.
Ngo-2004, ekamu baba owawina umncintiswano Zonke isiRashiya eMnyango Wezokuvikela kanye isayensi zezwe lethu ku "Kuhle Russian ekamu" isigaba. Minyaka yonke, aphethwe lapha iphrofayela nanhlanu usekhuluma izinsuku ezingamashumi amabili nane.
Ukuze kwemikhono guys eyakhelwe lokulala ezinhlanu, izakhiwo zesimanje kwanikeza ngamagumbi double, kathathu futhi quadruple. Amakamelo ayidabuli futhi kathathu unawo wonke Izinsiza. I quadruple - izindawo on the block. Izindawo akhethwe abazali, sokuletha abantwana lo "Azure" ikamu (Vyksa). Izithombe amakamelo atholakalayo izithombe ezikulezi zincwajana uma uthenga amathikithi futhi ku-athikili yethu.
Ukuze guys ekamu zonke izimo ngoba le midlalo njengento yokuzijabulisa inkundla ezimangalisayo nge Turf yesimanje yokufakelwa, zokudlala, kuhlangene basketball ne-volleyball izinkantolo, football iphimbo, ezemidlalo kanye ukuqina izindawo, zasendlini evuthayo yokubhukuda. Nezingane abathintekayo abaqeqeshi professional ukubhukuda amaseshini aerobics amanzi, i-volleyball ne-badminton, yokuzijwayeza yabasubathi basketball.
Phakathi naleso nokususa ekamu "Azure", isithombe ongawabona kulesi sihloko, lucwaningo ezihlukahlukene ezemidlalo imisebenzi zokuzithokozisa. Isebenzisa workshop yokudala namaqembu.
imisebenzi Impilo nokungcebeleka
Camp "Azure" (Vyksa) has a imisebenzi ngempilo nobungqabavu esibanzi lapho kugcizelelwa ukusetshenziswa sokuvivinya umzimba izici, inhlangano yokudla efanele kanye nokungcebeleka, izivakashi imfundo nokungcebeleka.
Camp isakhiwo yezokwelapha has:
ukukhanya amakamelo ukwelashwa;
ukufunda Vitamin yokwelapha kanye aromatherapy.
Ingane ngayinye udokotela, okuboniswe e ibalazwe resort, kungathatha luhlolo umnyuziki zokuxilonga. I-Centre ayisebenzisa ngayo ukwelapha nokuvimbela izifo:
isimiso sezinzwa (functional);
inhliziyo futhi igazi emithanjeni yakhe.
"Azure" ikamu (Vyksa): ukuthi ukuletha?
Uma uya ukuthumela ingane "Azure", bese kudingeka wazi ukuthi udinga ukuthatha uhambo. Eyokuqala, yebo, amaphepha adingekayo:
ikhophi yaleli umshwalense;
ifothokhophi isitifiketi sokuzalwa;
isitifiketi inhlalakahle sanitary-epidemiological.
Personal inhlanzeko izinto:
emuthini wokuxubha abese ibhulashi;
yangasese insipho yokuwasha izinto;
ubuso ngethawula futhi okugeza.
Ukuze kwesikhathi ekwindla-ebusika (September-Meyi), ingane uzodinga:
ezemidlalo zasendlini izicathulo kanye tracksuit;
Swimsuit / ukuncibilika;
oluthambile iraba cap;
isikhwama sokufinyelela echibini;
2 amaqoqo bafake abayitoho;
pullover efudumele noma ijezi;
nightgown / amaphijama.
Ngoba inkathi yasehlobo yokubuka uya isethi efanayo izinto, kodwa kucatshangelwa izimo sezulu.
Uma ingane iya ekamu "Azure" (Vyksa) ngesikhathi sesikole, kuyobe sekuba i-kudingekile tekubhala:
2 izibaya ngoyinki okwesibhakabhaka;
2 ipensela (elula);
5-notebook yezinyoni futhi umugqa;
Ukuze umsebenzi ngamunye shift nezingane 437, kudinga iqembu elikhulu futhi obumbene. Isimo samanje ekamu unabameleli amathathu namashumi ayisithupha ukuzibonakalisa ezahlukene. Futhi omunye wabasunguli be-kamu kwakungowesifazane bomdabu kule ndawo, okuyinto manje ophethe okuthunyelwe kukaNgqongqoshe Wezemfundo of Nizhny Novgorod esifundeni - uSergei Naumov.
Futhi manje amagama ambalwa ngabantu ezisebenza nezingane. Mhlawumbe, kunzima overestimate uthisha-umhleli yomsebenzi (namuhla kangaka okuthiwa ngokusemthethweni kumeluleki) uhlangana nezingane futhi amahora angamashumi amabili nane ngosuku waxhumana, okusiza ukujwayela bazuze amakhono kwawo namakhono awo, uhlela izinto ezihlukahlukene, futhi ukuzixazulula eziningi izinkinga zasekhaya ezingase kwenzeka usuku lonke.
Kuyaphawuleka ukuthi abangaphezu kuka-20% nabeluleki lanamuhla kanye waphumula ngokwabo e "French". Ekamu kukhona emithathu sokusebenza kwengqondo kwezemfundo futhi Methodist ezintathu. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo ihlelwe ukuqeqeshwa kothisha, cwaningo isipiliyoni, kuthiwa wanyathelisa izinguqulo zanamuhla methodical, wadala ezithakazelisayo izinhlelo ukuqhela.
Camp "Azure" (Vyksa): Izibuyekezo
Esikhathini Nizhny Novgorod ekamu esifundeni "Azure" kuthandwa kakhulu. Izaphulelo basakazwa izimboni, izibhedlela, kanye kokukhululwa kwaso njengoba umvuzo impumelelo ezifundweni. The guys iholide bajabule. Ayakujabulela ukuqonywa ithuba ukudlala imidlalo, iqhaza imincintiswano futhi imincintiswano zokudala. Amagama amaningi uhlobo izingane ukubhekana umeluleki, owasheshe yokuthola ulimi olulodwa kanye ezigcemeni zabo.
Cishe ukwelashwa spa kungenziwa wehlulelwa Izibuyekezo yabazali. Ngemva ushintsho, eyenziwa ekamu, izingane ukubuyela beqabulekile futhi waba namandla: umoya ohlanzekile futhi sithinta lesifanele ukudla ezinhlanu. izifo (ikakhulukazi yaleli pheshana zokuphefumula) isikhathi eside ungaphazamisi ingane.
Razvivalki izingane iminyaka engu-3 ubudala. Okokufundisa razvivalki izingane
"Dzhoset" Izingane ukubuyekezwa. Dzhoset - ukukhwehlela isiraphu izingane
Uyazi yini ukuthi ukondla umntwana?
Imidlalo zokufundisa enkulisa sokuthuthukisa ngempumelelo ingane
Ayikho sibi kakhulu kunalokho okuboniswa apula! Charlotte nge amagonandoda: iresiphi kuhovini Multivarki
Dolphinarium Koktebel - indawo ezithakazelisayo
Okungcono - "Botox" noma "Disport"? Iziphakamiso nokuphikisana
Hanioti Grandotel 4 * (Greece / Halkidiki): Izibuyekezo
Chandeliers Ceiling: i-Germany - ezweni eliphezulu izimpahla
Umkhuleko wocela ukuvikelwa amabutho ezimbi. Womthandazo "iNkosi uJesu Kristu 'uma afundza?
Indlela ukwandisa isivuno amazambane
Uchungechunge oluthinta kakhulu: uhlu. Izihloko ezithakazelisayo kunazo zonke eRashiya nakwamanye amazwe ngothando: uhlu